Aka na-achị Steeti Ebonyi bụ Eng. David Umahi, akwadola onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ka ọ bịa chịa nke ugboro abụọ.
Umahi kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, mgbe a kpọrọ ya oku n’ogige onye isi ala n’ụbọchị Tọzdee. Ebe ahụ ka ọ nọrọ kwuo sị “a chọrọ m ka ọ bịa zọharịa ọchịchị.”
Gọvanọ Umahi kwuru n’o jere ogige onye isi ala iji kwado maka ọbịbịa onye isi ala ga-abịa na Steeti Ebonyi n’izu ụka na-abịa abịa. O kwuru na gọọmenti nakwa ndi Ebonyi niile adịla njikere maka ịnabata onye isi ala.
Umahi kwuru na Prezidenti Buhari ga-eji ohere a gbape akwa elu, flyover bridge, n’olu bekee, nke a rụrụ n’aha onye isi ala, n’Akanu Ibiam Junction, Abakaliki, isi obodo steeti ahụ.
vGọvanọ Umahi kwuru na onye isi ala ga-ewere ohere ahụ gbape akwa atọ nke dị n’okporo ụzọ awara awara jikọrọ Enugu, Ebonyi na Cross River, ma si otu a jeruo Republic of Cameroon.
Ịhe ndị ọzọ ọ ga-agbape gunyere okporo ụzọ dị kilometa narị ise, ama egwuregwu nke a rụgharịrị, nakwa ọtụtụ ịhe ndị ọzọ. O kwuru n’onye isi ala ga-atọ ntọala ọdọ ahịa Ebonyi nke a ga-aru site n’oyiyi ọgbọ ahịa dị n’obodo Dubaị.